XAQIIQ: Aabaha Dhalay Neymar Jr Ee Neymar’s Sr Oo Xaqiijiyay In Wiilkiisu Uu Qaliin Mari Doono Iyo Muddada Ayna PSG Adeegiisa Ku Xisaabtami Doonin Oo Ka Hadlay. – GOOL24.NET
XAQIIQ: Aabaha Dhalay Neymar Jr Ee Neymar’s Sr Oo Xaqiijiyay In Wiilkiisu Uu Qaliin Mari Doono Iyo Muddada Ayna PSG Adeegiisa Ku Xisaabtami Doonin Oo Ka Hadlay.
Tan iyo shalay waxaa saxaafada dalalka France, Spain iyo Brazil ka soo baxay warar iska hor imanayay oo isku khilaafsanaa haddii xidiga ree Brazil iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Neymar Jr uu qaliin mari doono, waxaana sidoo kale ay taasi keentay in aan la garan muddada la filan karo in xidigani uu garoomada ka maqnaan doono, laakiin waraysi uu bixiyay Neymar’s Sr oo ah aabaha xidiga ree Brazil dhalay ayaa war xun u sheegay jamaahiirta PSG.
Neymar’s Sr ayaa cadeeyay in wiilkiisu uu qaaliin mari doono isla markaana ay haddaba kooxdiisa PSG ogtahay in ayna adeegiisa ku xisaabtami doonin muddo 6 ilaa 8 usbuuc ah taas oo halis galinaysa diyaar garowgii xidiga ree Brazil ee koobka aduunka.
Neymar Jr ayuu soo gaadhay dhaawac jabniin ah oo ka soo gaadhay farta shanaad ee canqowga lugtiisa midig intii lagu jiray kulankii Marsielle sida ay warbixin caafimaad hore ugu xaqiijisay kooxdiisa PSG laakiin wali maamulka PSG ayaan ku dhawaaqin in Neymar uu qaliin mari doono.
Neymar’s Sr oo waraysi siiyay ESPN Brazil ayaa yidhi: “PSG way ogyihiin in ayna Neymar ku xisaabtami doonin lixda ilaa siddeedda usbuuc ee soo socda. Ma jirto doorasho kale. Waxaanu sugaynaa in aanu la hadalno PSG si xaaladan loo xaliyo”.
Intaa kadib aabaha dhalay xidiga ree Brazil ee Neymar’s Sr ayaa xusay in Neymar Jr aanu lahayn go’aanka uu qaliinka ku marayo wuxuuna xusay in dhakhtarka xulka qaranka Brazil uu soo gaadhi doono France balse hadalkiisa kadib waxa uu dhaktarka Brazil soo gaadhay Paris.
Neymar’s Sr oo arimahan ka hadlayay ayaa yidhi: “Ma aha go’aanka Neymar, ma aha mid uu isagu qaadanayo. Isagu dhakhtar ma aha aniguna ma ihi. Hadda dhakhtarka kooxda qaranka Brazil ayaa iman doona isla markaana wada jir ayaanu go’aanka u gaadhi doonaa. Barri (Arbacada maanta) ayaanu go’aanka gaadhi doonaa”.
Ugu danbayn Neymar’s Sr ayaa hadalkiisa raaciyay: “Maanu doonayn in aanu ku jirno xaaladan, laakiin waxaa waajib nagu ah in aanu isku dayno sidii aanu Neymar ugu soo celin lahayn sidiisii ugu fiicnayd”.
Hadalka Neymar’s Sr ayaa si cad u beeninayaya waraysi uu macalinka PSG ee Unai Emery ku sheegay in Neymar Jr aanu qaliin mari doonin isla markaana uu wali fursad yar u haysto in uu ciyaaro kulanka Madrid taas oo la sheegay in dadka Neymar ka ag dhawi ayna ku faraxsanayn.